Vashandi veApple vanoenda kunotongwa vachipesana neEpic Games | Ndinobva mac
Vashandi veApple vanoenda kunotongwa vachipesana neEpic Games
Iyo sipo opera pakati peApple neEpic Mitambo yave kuda kusvika pamusoro soro. Kukakavara kwakanyanya, kurwa uye kuzvidzwa paruzhinji kuchave nenzvimbo yepamusoro zuva rekutongwa kwenyaya. Uku ndiko kuchave kutanga kwemagumo uye isu tinofungidzira kuti hazvizotora nguva yakareba kuti tizive kuti ndiyani pamakambani maviri ari pachokwadi. Kana Apple ichidzivirira iyo haina kushandisa monopoly kana Epic Mitambo pane yavo yekuda kuva "yemahara". Ivai chero zvazvingava, mumwe nemumwe achafanirwa kukwikwidza nyaya yavo uye Apple yakatotaridza ndiani achange achitarisira kudzivirira kambani. Vashandi veApple vari kutongwa.
Apple yakapa runyorwa rayo rwezvapupu zvekuyedza kwayakaita kurwisa Epic Mitambo. Vazhinji vatungamiriri veApple kupupura, kusanganisira Apple's CEO Tim Cook, Apple shamwari yake Phil Schillery, uye mutevedzeri wemutevedzeri weApple software yeinjiniya, Craig Federighi. Chinyorwa cheApple chinosanganisirawo chitoro cheapp app Matt Fischer. Musoro weRisk uye Kubiridzira Injiniya Algorithms Eric Friedman. Commerce uye Kubhadhara Director Eric Grey. Mutambi Wekuvandudza Mutambo Mark Grimm nevamwe vashandi mukushambadzira, hukama hwekuvandudza, uye mamwe mamiriro akafanana.
Iye CEO wekambani ndiye achazowedzera nguva achipindura mibvunzo yemapato. Cook naFederighi vanotarisirwa kuongororwa uye kupindura mibvunzo kweanenge maawa mashoma. Zvino, Schiller, anoona nezveApp Store, achapupura panguva maawa gumi.
Vatungamiriri vedu vakuru vanotarisira kugoverana nedare zvakanakisa zvakaitwa neApp Store pazvinhu zvitsva. Zvakare mune hupfumi hwenyika uye neruzivo rwevatengi mumakore gumi apfuura. Tine chokwadi chekuti nyaya yacho icharatidza izvozvo Epic nemaune kutyora chibvumirano chavo kungo wedzera mari yavo, zvinova ndizvo zvakakonzera kubviswa kwavo kuApp Store. Mukuita kudaro, Epic yakatenderedza zvinhu zvekuchengetedza zveApp Store nenzira yaizotungamira mukukwikwidza kushoma uye nekuisa kuvanzika uye kuchengetedzeka kwedata revatengi nenjodzi huru.
Epic zvapupu zvinosanganisira CEO weEpic Mitambo Tim Sweeney uye vamwe vashandi veEpic, uye zvapupu zvekunze zvichasanganisira vatungamiriri kubva paFacebook, Microsoft, Nvidia uye aimbove mukuru wesoftware yeApple Scott Forstall. Epic yakati muna Kukadzi kuti yaiedza kubata Forstall, asi yanga ichinetsa kumuwana. Epic inoronga kufonera Forstall nekuda kwekubatanidzwa kwake muApp Store kuvhurwa asati abva kukambani muna2013.
Kutongwa kuchatanga neMuvhuro, Chivabvu 3. Iko kutarisana kumeso asi hapazove nedare rinobatanidzwa. Pakutanga kwemwedzi uno, Mutongi Yvonne González akamhan'arira kutongwa kweye-munhu, achiti nyaya iyi "yakakosha zvakakwana" kuti dare rinzwe pacharo. Hutsanana hwese uye nhanho dzekuchengetedza nhanho dziripo dzinozotevedzwa kuvimbisa kuti hakuna munhu anogona kutapukirwa neCoronavirus.
Asingasviki mwedzi miviri ndosara kuti kutongwa kwakamirirwa kwenguva refu kutange. Takataura zvakawanda nezve ino sipo opera, nekuti panga paine zvakawanda zvekuudza. Zvakakosha kupfuura zvatinogona kufunga, nekuti kana Epic Mitambo ikatora kukunda, icharatidza nzira nyowani yekuona zvinhu kuApple. Pamusoro peizvozvo iwe uchafanirwa kutarisana nenhamba isingaperi yezvikumbiro zvakafanana izvo zvichave zviri kuuya kubva kune vako vese vanokwikwidza uye vanogadzira pane chero nhanho. Ini handifunge kuti Apple inopinda mune aya "aubergines" vasina kuvharwa musana uye vasina kuziva zvavari kuita nguva dzese.
Tichava vakanyatsoteerera kuti tione kuti zviitiko zvinoitika sei kunyanya sezvo zuva rekutongwa rasvika, handaizoshamiswa kana kushamisika kweminiti yekupedzisira kukauya. Kunyanya kubva Epic Mitambo. Chimwe chiitiko chitsva muFortite kana chiziviso chitsva ... chimwe chinhu chinogona kuuya. Icho chivhimi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Vashandi veApple vanoenda kunotongwa vachipesana neEpic Games
Vivaldi navigator anowanawo paApple Silicon yepamusoro-yekumhanya chitima
Mushure mekunge Apple yarega iMac Pro ivo vatengeswa vachiri kupa zvinhu